सुनको मूल्य ५०० ले बढ्यो, कति पुग्यो तोलाको ?
Tue, Jan 21, 2020 at 11:56am
झिनो अङ्कले बढ्यो नेप्से #आहा खबर# भ्रष्टाचारको अभियोगमा इन्टरपोलका पूर्व प्रमुखलाई साढे १३ वर्ष कैद #आहा खबर# भारतसँगका थाती विषय टुङ्गो लगाउने समय आएको छ : प्रम #आहा खबर# मेलम्चीको मुहानसम्मको सडक निर्माण शुरु #आहा खबर# कांग्रेसमा चर्कदो विवाद : अनामनगरमा रामचन्द्रको छुट्टै कार्यालय #आहा खबर# हिटरको प्रयोगमा अपनाउनुपर्छ सावधानी, नत्र ज्यान जानसक्छ #आहा खबर# हिटर बालेर सुतेका आठ भारतीय पर्यटकको मृत्यु #आहा खबर# बढ्यो सुनचाँदीको भाउ, तोलाको कति ? #आहा खबर# ‘साङ्लो’ रिलिज नहुँदै चर्चामा पूर्व मिस नेपाल निकिता #आहा खबर# नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले गरे एकीकृत जाँच चौकी 'आइसिपी' उद्घाटन #आहा खबर# १० मिनेटमा घुम्नुस्, दामोदर कुण्डदेखि त्रिवेणीधाम #आहा खबर# अग्नि सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न माग #आहा खबर# पश्चिमी वायुको प्रभाव : वर्षा र हिमपातको सम्भावना #आहा खबर# एप्पल आइफोन ९ सार्वजनिक हुँदै, के छन् फिचर्स ? #आहा खबर# तेब्बर गतिमा फैलिँदै चीनमा कोरोना भाइरस #आहा खबर#
मंगलवार, १७ भाद्र २०७६,	आहाखबर	4.06K
काठमाडौँ, १७ भदौ
भदौ दोस्रो साता केही ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज फेरि प्रतितोला रु ५०० ले वृद्धि भएको छ ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ¬्घका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७२ हजार ५०० पुगेको छ । आइतबार र सोमबार छापावाला सुन प्रतितोला रु ७२ हजारमा खरिदबिक्री भएको थियो ।
त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि प्रतितोला ५०० ले वृद्धि भएको छ । तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७२ हजार २०० निर्धारण गरिएको महासङ्घले जनाएको छ । यसअघि तेजाबी सुन प्रतितोला रु ७१ हजार ७०० मा कारोबार भएको थियो ।
सुनको मूल्य वृद्धि भएसँगै चाँदीको मूल्य पनि सामान्य वृद्धि भएको देखिएको छ । नेपाली बजारमा आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला रु १० ले वृद्धिभई ८९५ पुगेको छ ।
पछिल्लो १५ दिनमा सुनको मूल्य चार पटक बढेको छ भने दुई पटक घटेको छ । सो अवधिमा सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई हजार ५०० ले वृद्धि भएको छ । भदौ १ गते छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७१ हजार र तेजाबी सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७० हजार ७०० कायम भएको थियो ।
साउन महीनाको शुरुवातदेखि नै नेपाली बजारमा सुनको मूल्य उकालो लाग्न थालेको हो । साउन महीनामा मात्रै सुनको मूल्य करीब रु सात हजार ५०० ले वृद्धि भएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य आकासिएसँगै नेपाली बजारमा पनि मूल्य बढेको महासङ्घले जनाएको छ । आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य प्रतिऔँस एक हजार ५२७.१० अमेरिकी डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढ्दो सुनको मूल्यले नेपाली बजारलाई दबाबमा पारेको हो ।
बढ्दो क्रममा रहेको चीन–अमेरिका व्यापार युद्ध, अमेरिकी केन्द्रीय बैङ्कद्वारा ब्याजदरमा कटौतीलगायत कारणबाट विश्वबजारमा सुनको मूल्य प्रभावित भइरहेको छ । पछिल्लो समय अमेरिका र चीनले एकअर्का देशका उत्पादनमा थप कर वृद्धिको घोषणागरेसँगै सुनको मूल्य झन् प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ ।
माघको पहिलो दिन बढ्यो सुनको भाउ, कति पुग्यो तोलाको ?
निगमको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुको कारण यस्तो छ
नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर 'भाटभटेनी'ले कर छलेको ठहर
निर्यात बढाउन अर्थमन्त्रीको आग्रह
अबको आन्दोलन आर्थिक विकासका लागि हुनुपर्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा
नेपालमा लगानी गर्न आउनुस् : मन्त्री पुन
भारतले प्याज निर्यात खुकुलाे गरेपछि मूल्य ह्वात्तै घट्यो
युनिक सहकारीको आय २५ प्रतिशतले वृद्धि
सुनचाँदीको मुल्य घट्यो, तोलाको कति ?
भारत सरकारकाे प्रतिबन्ध निर्णयसँगै भन्सारले रोक्यो नेपालको प्रशोधित पाम आयल
आर्थिक समृद्धिलाई एकजुट होऔँ : मन्त्री भट्ट
इरान–अमेरिका तनावको असर पेट्रोलियम बजारमा : नेपाल कति प्रभावित ?
नेपाली बजारमा सुनमा दिनहुँ नयाँ नयाँ रेकर्ड, किन बढ्यो मूल्य ?
भारतले पाम आयलकाे आयातमा राेक लगाएपछि नेपालको निर्यात प्रभावित
सुनको मूल्यले राख्यो ऐतिहासिक रेकर्ड, कारोबार ठप्प
खतिवडा अब अमेरिकाका लागि राजदूत ?
अमेरिका-इरान विवादले अचाक्ली बढ्याे सुनको भाउ, आज कति छ ताेलाकाे ?
सुनको मूल्यले महँगो ‘रेकर्ड’ बनायो, अझै बढ्ने संकेत, यस्तो छ कारण
बढ्यो डलरको भाउ, अब १ डलर किन्न १ सय १५ रुपैयाँ चाहिने
इराक-अमेरिका तनावले तेलको मूल्यमा कस्तो पर्ला असर ?
कुमारी जबको छैठौँ वार्षिकोत्सव : अत्याधुनिक जब वेभसाइट र मोवाइल एप शुभारम्भ
लगानी बोर्डले टुंग्यायो १४ लगानीकर्ताको सूची
सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, अझै बढ्ने अनुमान
भुक्तानी नदिने सुगरमिलमा तालाबन्दी
उद्योगको प्रदूषणबाट स्थानीयवासी पीडित
भ्रष्टाचारको अभियोगमा इन्टरपोलका पूर्व प्रमुखलाई साढे १३ वर्ष कैद
कांग्रेसमा चर्कदो विवाद : अनामनगरमा रामचन्द्रको छुट्टै कार्यालय